HORDHAC : Watford VS Arsenal? Xogta kulanka iyo rikoorada laga diwaan giliyey ciyaarta – Gool FM
( England) 15 Abriil 2019 kooxda Arsenal ayaa fooda dari doonta dhigeeda Kooxda Watford oo iska xaadirisay finalka tartanka Fa Cup oo ay kula balan sanyihiin Kooxda Man City.
Arsenal ayaa dooneysa in ay la dhibco noqoto Kooxda Chelsea oo xalay cashar loo dhigay kaddib markii loogu badiyey 2-0, tartanka loogu jiro kaalmaha afarta sare ayaa sii xogeysanaya xili uu gabo gabo uu sii marayo horyaalka Premier League.
Kooxda Watford waxaa ka maqnaan doona kulanka ciyaartoyda kala ah Jose Holebas, Domingos Quina iyo Tom Cleverley.
Holebas ayaa la dhibaatoonaya dhaawac ka soo gaaray cajarka intii lagu jiray kulankii semi-finalka FA Cup ee Wolves, Quina ayaa isna xanuun ka dareemaya garabka halka Cleverley uu isna dhibaato ka qabao kubka.
Sokratis Papastathopoulos oo Arsenal ka tirsan ayaa waxaa u bilaabanaya ganaax labo kulan ah madaama ay u buux santay markii labaad shan jaale, sida sharciga ahna xidigii 10- jaale qaataa waxa uu seegayaa labo kulan.
Granit Xhaka ayaa qaba dhaawac gumaarka ah waana la qiimeyn doonaa kahor kulanka, halka Danny Welbeck, Rob Holding iyo Hector Beller ay weli ka maqan yihiin.
Ogeysiisk ciyaarta :
Kulanka : Watford VS Arsenal? (Premier League)
Goobta : Vicarage Road
Garsoorka : Craig Pawson
Watford ayaa ku guraacday Kooxda Arsenal garoonkeed xili ciyaareedkii hore iyada oona la ogaa in Tom Cleverley uu gool ugu shubay dhamaad ciyaarta.
Arsenal ayaa badisay afar kulan oo ka mid ah Premier League oo ay booqatay garoonka Vicarage Road. Balse marnaba garoonkan qasaaro kuma aysan gaarin labo kukan oo xiriir ah tan iyo guul daro sedex kulan oo xiriir ah oo soo gaartay November 1987.
Arsenal ayaa badisay shan ka mid ah 7-dii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka, lakiin wax ay guul daro kala kulmeen Everton kulankii ugu dambeeyey.
Gunners ayaa badisay kaliya labo kulan oo ka mid ah 12kii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen tartamada oo dhan (3-bareejo iyo 7-qasaaro).
Watford ayaa badisay seddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah, mana loogu badinin garoonkood Vicarage Road tan iyo maalmihii Boxing Day.
Safafka macquulka ah ee labada naadi ay ku sio kala gali karaan :